Coral Reef: မျက်လုံးများကို ဖတ်ရှုခြင်း
khin oo may said on March 7, 2010 at 11:57 AM
ကြည့်ချိန်မရဘူး. အားတာနဲ့ အိပ်တာဘဲ မအိပ်ရင် တယ်လီဖုံထုးတ်ပြီးကလိတယ်။
ward verification လေးဖြုတ်ပေးပါလား အချိန်ကုန်တယ် မျက်စိကန်တယ်။
Rita said on March 7, 2010 at 12:00 PM
အဲလို စာမျိုးကြိုက်တယ်။ လူတွေကို အဲလိုမျိုး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ personality အမျိုးမျိုးကို အင်မတန် စိတ်ဝင်စားတယ်။
ဇွန်မိုးစက် said on March 7, 2010 at 12:03 PM
မkom ပြောလို့ word verification ဖြုတ်လိုက်ပြီနော်။
Anonymous said on March 7, 2010 at 12:07 PM
ကျနော့မျက်လုံးတွေ အခုဖတ်ကြည့်ရင် ဘာမြင်ရမလဲ
အင်း ကျနော်လည်း သိချင်မိတယ်
reenoemann said on March 7, 2010 at 1:04 PM
ရောမရောက် ရောမ လိုကျင့်တာ အကောင်းဆုံးထင်မိတာပဲ။
ချစ်ကြည်အေး said on March 7, 2010 at 2:58 PM
အင်း...အမ ကရော...ဟီးဟီး နောက်တာ...၊ မျက်လုံး မှာ ထက်မြက်တဲ့ စိတ်လေးတွေ အမတို့ တချို့ မြန်မာတွေမှာ ရှိနေပါသေးတယ် ညီမရေ...ညီမလေးက ကြင်နာတတ် နူးညံ့တဲ့ မျက်လုံးမျိုး...:)
Shinlay said on March 7, 2010 at 4:10 PM
မျက်လုံးလေးတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်တစား ဖတ်သွားပါတယ်။ မှတ်သားသွားပါတယ်။
kaungkinpyar said on March 7, 2010 at 7:09 PM
တို့ ကတော့ ဇွန့် မျက်လုံးလေးတွေ ကြိုက်တယ် ..လှလှလေး...း)
ဖိုးစိန် said on March 7, 2010 at 9:33 PM
ကျနော်လဲ ဝါသနာပါတယ် မျက်လုံးတွေကိုဖတ်ရတာ သူတို့ရဲ့ စိတ်တွေကို သိရတယ်..
စိတ်ဝင်စားရင် ဗေဒင်တောင် ဖမ်းတွက်လိုက်သေးးးး
ရွှေပြည်သူ said on March 7, 2010 at 9:59 PM
အစ်မဇွန်ရေ... မျက်လုံးတွေအပေါ် မြင်တဲ့အမြင်က တော်တော်လေးကို တူနေတယ်... ဟုတ်တယ်နော်... ညီမတို့တွေ တော်တော်များများရဲ့ မျက်လုံးတွေထဲမှာ Self-confident တော့ နည်းနေသေးတယ်...။ တစ်ချိန်တော့ အစ်မပြောသလို အားလုံးမှာ “ရဲရင့်တည်ကြည်ပြတ်သားပြီး ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်အ၀ရှိတဲ့ မျက်လုံးမျိုး” တွေ့ရလိမ့်မယ် ထင်ပါရဲ့။
Wunna said on March 8, 2010 at 11:38 AM
“ရဲရင့်တည်ကြည်ပြတ်သားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်အ၀ရှိတဲ့ မျက်လုံးမျိုး”တွေ့ရမယ် ...
သီဟသစ် said on March 8, 2010 at 9:28 PM
ကျွန်တော်လည်း မျက်လုံးတွေကို ဖတ်ရတာ သဘောကျတယ်။ သို့ပေမယ့် ခုလို လူမျိုးလိုက် analyze မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။
Anonymous said on March 8, 2010 at 10:05 PM
I also agreee your opinion..thanks
Anonymous said on March 9, 2010 at 12:50 AM
How the hell do you know those malays are Singaporean malays
or Malaysian malays?
noblemoe said on March 9, 2010 at 12:20 PM
ဟုတ် မျက်လုံး ကြောင်းအားပေးသွားပါတယ်။
ကြုံရင် မိုး မျက်လုံးလည်းဖတ်ပေးနော် မ
ကိုးရီးယားလေးတွေ မျက်လုံးကေားp
ဇွန်မိုးစက် said on March 9, 2010 at 8:52 PM
to anonymous: normally i do differentiate by listening their accents. Malaysian Malays are more friendly than S'porean. That's what I feel.
It would be nicer if your phrase didn't include 'the hell'. Anyway...thanks for reading & your comment.
Nu Thwe said on March 19, 2010 at 4:31 PM
မြင်တတ်တာရော၊ ရေးတတ်တာရော ကြိုက်တယ်။ Wavelength ချင်း တူတယ်လို့ ပြောရမလားပဲ (တူချင်ရဲ့လားတော့ မသိပါဘူး)
ကိုယ်တို့ရဲ့မျက်လုံးတွေလား။ အချိန်၊ နေရာနဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတယ် ထင်ပါတယ်။ အရင်းခံ အကြောင်းတရားက သိပ်မကောင်းတော့လည်း ယုံကြည်မှုတွေ ယိုဖိတ်လျှံထွက် မနေတော့တာ သိပ်မဆန်းလှဘူး။ ဒါပေမယ့် တဦးချင်း တယောက်ချင်း ကြိုးစားအောင်မြင် ဂုဏ်တင်နိုင်ပါသေးတယ်။ စိတ်မလျှော့ကြေးလေ။
အရေးကြီးတာက ကိုယ့်မြန်မာချင်း တွေ့တဲ့အခါ၊ မြန်မာပြည် ပြန်လို့ ကိုယ့်လောက် အခြေအနေ မဟန်သူတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ မာနမျက်လုံးတွေ ဖြစ်မနေဖို့ပါပဲ။ ဒါမျိုးလေးတွေ တွေ့ဖူးနေသလားလို့။